क्यान्सरबाट जोगिन के-के खानेकुरा खाने – Hotpati Media
आज: | Wed, 12, May, 2021
क्यान्सरबाट जोगिन के-के खानेकुरा खाने
१५ माघ २०७४, सोमबार १०:१९ मा प्रकाशित (3 बर्ष अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ९ मिनेट
काठमाडौं – क्यान्सर भयावह रोग हो, जसको उपचार कठिन मात्र छैन, कतिपय अवस्थामा असंभव पनि । यद्यपी क्यान्सरको लक्षण सुरुवाती अवस्थामै थाहा भयो भने, उपचार हुन्छ । क्यान्सरलाई जितेर सामान्य जीवनमा फर्किएकाहरु हाम्रै समाजमा धेरै छन् ।
क्यान्सर किन लाग्छ ? यसका अनेक कारण हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि अस्वस्थ्य जीवनशैली मूख्य कारण मानिएको छ । जीवनशैली भन्नसाथ खानपान जोडिने भइहाल्यो ।
खानपानकै कारण क्यान्सर लाग्न सक्छ, क्यान्सर प्रतिरोधी गुण पनि खानेकुरामै हुन्छ । तर, सही खानेकुरा छनौट गर्नुपर्छ ।हाम्रो भान्साकोठामा नै धेरै खानेकुराहरु छन्, जसमा क्यान्सर प्रतिरोधी गुण हुन्छ । के हुन् त ती खानेकुरा ?
एन्टिअक्सिीडेन्ट गुणहरुबाट भरिपूर्ण ग्रीन टीले शरीरलाई रोग प्रतिरोधी बनाउन सहयोग गर्छ । यसमा एक किसिमको पोषण तत्व हुन्छ, जसले क्यान्सरको कोशिकालाई बढ्न दिदैन । त्यसैले क्यान्सर प्रतिरोधी खानेकुरामा ग्रीन टि मूख्य मानिन्छ ।
तुलसीलाई ‘क्यान्सर किलर’ भने पनि हुन्छ । तुलसीको नियमित सेवनले शरीरका अनेक रोगहरु समाप्त हुँछन् । हरेक दिन तुलसीको २ वा ३ पत्ता खाने गर्नुस । यसबाट क्यान्सर त के ज्वरो पनि आउँदैन ।
गाईको दुधमा यति शक्ति हुन्छ कि यसले हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनुका साथसाथै हामीलाई कैयन रोगहरुबाट बचाउँछ । गाईको दुधको नियमित सेवनबाट हामी क्यान्सरलाई पर धकेल्न सक्छौ ।
हाम्रो खानपिनमा बेसारको विशेष स्थान हुन्छ । यसको प्रयोग शुभ कार्यमा पनि गरिन्छ । बेसार एउटा राम्रो एन्टिसेप्टिक हो । त्यसैले यसको नियमित सेवन गर्नुस । बेसारको नियमित सेवनले क्यान्सरलाई छेउछाउ आउन दिँदैन ।
पानी जतिसक्दो धेरै पिउने गरौं । दिनभरमा कमसेकम ३ देखि ५ लिटर त पिउनै पर्छ । फोहोर पानीको सेवनबाट भने बच्नुपर्छ किनभने यसले क्यान्सरलाई निम्तो दिन सक्छ । राति तामाको भाँडोमा पानी भरेर राख्नुस । यसमा ३ वा ५ तुलसीको पत्ता हाल्नुपर्छ । बिहान खाली पेटमा यो पानी पिउने गरौं । क्यान्सरबाट बच्ने यो एकदमै प्रभावकारी उपाय हो ।
नीमलाई आयुर्वेदमा सर्वरोग नाशक भनिएको छ । नीममा क्यान्सरसँग लड्ने शक्ति पनि हुन्छ । क्यान्सरको रोगीले यदि दैनिक नीमको ८ देखि १० पत्ता खुवाउने हो भने उसको स्वास्थ्यमा चाँडै सुधार देखिन थाल्छ ।
सोयाबिनमा क्यान्सरसँग लड्ने शक्ति हुन्छ । यसमा हुने ओमेगा ३ ले शरीरमा पोषक तत्व पुर्‍याएर क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षणहरुलाई पहिले नै रोकिदिन्छ । त्यसैले भोजनमा भोजनमा सोयाबिन बढिभन्दा बढि प्रयोग गर्नुस । यसले ट्यूमरलाई बढ्न दिँदैन ।
दहीले आन्द्रामा हुने क्यान्सरबाट बचाउँछ । दहीमा हुने ब्याक्टेरिया क्यान्सरबाट लड्न सहयोगी हुन्छ । यसले शरीरमा क्यान्सर बढ्नबाट रोक्छ ।
नरिवल पानीको सेवनले आन्द्रा र कलेजोको क्यान्सरमा फाइदा मिल्छ । साथै यसले क्यान्सरको सम्भावनालाई पनि घटाउँछ । त्यसैले नियमितरुपमा नरिवल पानीको सेवन गर्नुस ।
बेलको जुस पनि क्यान्सर रोक्न प्रभावकारी हुन्छ । यसको सेवनले ब्लड क्यान्सर र हड्डीको क्यान्सरको प्रभाव कम भएर जान्छ ।
गाजरको सेवन स्वास्थ्यका लागि जति फाइदाजनक छ । क्यान्सरको रोकथामका लागि पनि त्यत्तिकै असरदार छ । गाजललाई सलादको रुपमा खाए पनि हुन्छ, जुस बनाएर पिए पनि हुन्छ ।
क्यान्सरको रोगहरुका लागि लसुन एउटा औखति जस्तै हो । क्यान्सरका रोगीहरुलाई यदि लसुन पिसेर पानीमा घोलेर खुवाइयो भने यसबाट क्यान्सर भएकाहरुलाई औधि फाइदा पुग्छ । क्यान्सरबाट बच्नका लागि लसुनको पानी जसले पिए पनि हुन्छ ।
टमाटरमा हुन प्रोटिनले शरीरमा क्यान्सरको प्रभावबाट हुने खतराहरु कम गर्छ । त्यसैले आफ्नो दैनिक खुराकमा टमाटरलाई समावेश गर्न बिर्सनु हुन्न ।
चुकन्दरको आधा कप जूस दिनमा २ देखि ३ पटक पिउँदा क्यान्सर प्रारम्भिक लक्षणमै रोकिन्छ ।
कागतिको रस क्यान्सर रोगीहरुका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसको सेवनबाट शरीरमा क्यान्सर लाग्न पाउँदैन ।
अंगुरको सेवन वा अंगुको जुन पिउनाले पनि क्यान्सरलाई रोक्न सकिन्छ ।
अदूवाको रस दिनमा दुईपटक दुई चम्चाको मात्राले सेवन गर्दा क्यास्रबाट निक राहत प्राप्त हुन्छ ।
के छाड्ने ?
अघि पनि भनियो, खानेकुराकै कारण क्यान्सर हुनसक्छ । कतिपय खानेकुरा, जो क्यान्सरको कारण बन्न सक्छ । के हुन् त ति ?
सुर्तिको सेवन – चुरोट पिउँदा फोक्सोको क्यान्सर, किड्नीको क्यान्सर ब्ल्याडरको क्यान्सर र गर्भाशयको क्यान्सर हुन सक्छ । सुर्ति र गुट्खा खाँदा मुख र पाचन ग्रन्थिमा क्यान्सर हुन सक्छ । क्यान्सरमा ९० प्रतिशत घटनामा यसको सबैभन्दा ठूलो कारण चुरोट वा सुर्ति नै रहेको पाइएको छ ।
बिडी वा चुरोट- बिंडी वा चुरोट पिउँदा शरीरमा क्यान्सर उत्पादक तत्व प्रवेश गर्छन् । यी तत्वले स्वस्थ कोशिकाहरुलाई रोगी कोशिकाहरुमा बदलिदिन्छन् र यही कोशिकाहरु क्यान्सरमा परिणत हुन्छन् ।
अस्वस्थ्यकर खाना- कुहिएको, बासी, सडेगलेको, तारेको, भुटेको, मसलेदार खानेकुरा क्यान्सरको कारण बन्छ ।
शरीरलाई फुर्तिलो राख्ने र तौल नियन्त्रण गरौं
फिटनेसका लागि यो आवश्यक छ कि जति क्यालोरी खानामा लिइन्छ, त्यसको प्रयोग हुनुपर्छ, अन्यथा शरीरमा बोसो जम्न थाल्छ र मोटोपना बढ्न थाल्छ । मोटोपनाको कारणले मूत्राशयको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, गर्भाशयको क्यान्सर, ठूलो आन्द्राको क्यान्सर आदिको खतरा बढेर जान्छ । त्यसैले व्यायाम गरौं, शारीरिक श्रम गरौं ।
पौष्टिक खानेकुरा खाने
शरीरलाई रोगबाट बचाउनका लागि, फिटनेसका लागि र दिनभर कामका लागि आवश्यक उर्जा पाउन पौष्टिक आहार आवश्यक हुन्छ । पौष्टिक आहारको अर्थ फल, सागपात, दूध, अन्डा र ड्राइ फ्रुट्स हो । यसका अलावा पनि खाने हो, त्यसको गुणस्तर र सरसफाईमा ध्यान दिनुपर्छ ।
घामका हानिकारक किरणहरुबाट बच्ने
सुर्यको किरण शरीरका लागि फाइदाजनक हुन्छ, तर, एउटा सिमासम्म मात्र । ओजन तहमा प्वाल हुनाले घामको साथमा हानिकारक अल्ट्राभ्वाइलेट किरणहरु पनि आउँछन् जो शरीरका लागि हानिकारक हुन्छन् । यी किरणहरुको सम्पर्कमा लामो समय रहँदा स्किन क्यान्सरको खतरा पै
स्वास्थ्य सम्बन्धि थप
आज पनि भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै
आज र भोलि बालबालिकलाई भिटामिन ‘ए’ खुवाइँदै
गर्मी बढेसँगै तराईका जिल्लामा लामखुट्टेको प्रकोप बढ्यो
नेपालमा थपिए ९ हजार ३०५ जना संक्रमित, १६८ को मृत्यु
जसपाले राष्ट्रपतिलाई गरायो जानकारी : गठबन्धन सरकारमा जाँदैनौँ
आज ३ कम्पनीको शेयरमा सकरात्मक सर्किट
मास्क र स्यानिटाइजर धेरै मूल्यमा बेच्ने औषधि पसललाई दुईलाख जरिवाना
सुनको भाउ घट्यो
भारतमा दैनिक ज्यान गुमाउने चार हजार नाघे, नयाँ भेरियन्ट घातक
बुटवलमा कोरोनाले थप ६ जनाको मृत्यु
उपत्यकामा निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, सीडीओको बैठक बस्दै
विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल, प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त
निषेधाज्ञा १५ दिन बढ्ने निश्चित
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानको प्रतिवन्ध १७ जेठसम्म लम्बियो
अक्सिजन सिलिन्डर अस्पतालमा फिर्ता गरिदिन सरकारको आग्रह
काठमाडौं- भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा कोभिड–१९ बाट चार हजार दुई सय पाँच जनाको ज्यान गएको छ । यो हालसम्मकै सर्वाधिक दैनिक संख्या हो । भारतमा देखिएको नयाँ... विस्तृतमा
भारतमा केही घट्यो संक्रमण, मृत्युदर पनि घट्यो
भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए चार लाख बढी संक्रमित, चार हजार बढीको ज्यान गयो